Casa Angela - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBali
Apartment kumbindi Ivrea.
Kumgangatho we-5, kunye ne-lift, intendelezo yangaphakathi kunye negaraji enendawo yokupaka i-1.
Ukungena, ikhitshi, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala.
Indawo yokuhlala malunga ne-90 square metres, eqaqambileyo kakhulu
Le ndlu inesango lokungena kwindawo yokuhlala enekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo eline hob, ifriji kunye nesikhenkcezisi, ioveni yemicrowave, itafile enezihlalo ezi-3.
Ikhitshi elinxibelelana negumbi lokuhlala, elinesofa, itafile kunye nodonga lwefestile ejonge kwinqaba yase-Ivrea ngesakhelo seSerra Morenica.
Igumbi lokulala, elikufuphi negumbi lokuhlambela, lineebhedi ezi-2 zesiFrentshi kunye ne-wardrobe ye-6-door.
Igumbi lokuhlambela elineshawa linefestile kwaye ligcwele izinto zangasese. Kukho iibhalkhoni kumacala omabini efulethi.
Indlu, ekwindlela edibanisa ne-Aosta Valley, kumgangatho we-5 kunye ne-lift, iyonwabela umbono omangalisayo we-Alps kunye neSerra Morenica.
Okugqwesileyo njengesiseko sokutyelela kunye nokufumana i-Historical Carnival yase-Ivrea kunye ne-Equine Fair yaseSan Savino, njengoko ikufuphi neziko lembali kunye nezikwere zembali, indawo yeziganeko zombini.
Isisombululo esiluncedo ukufikelela kwibala leCanoe kwiDora Baltea.
Ikufutshane kakhulu (imizuzu emi-5 ngeenyawo) kuzo zombini iSibhedlele kunye neKliniki ye-Eporediese, inokusetyenziswa njengenkxaso yoncedo kwizigulane.
Indawo ye-54 ye-Italian Unesco, imisa kwi-Via Francigena, intliziyo yembali kunye neyomhlaba yendawo yaseCanavese, embindini we-5 indawo yamachibi kunye nokuphosa ilitye ukusuka kwiLake Viverone kunye neMorainic Amphitheatre. Isiqalo esihle kakhulu sokutyelela i-Aosta Valley kunye nezinye iiNtlambo zaseCanavese, ezifana neValchiusella kunye neValle Orco.
Umbuki zindwendwe ngu- Bali
viaggio... mi piace viaggiare, soprattutto in moto.
ho lavorato nel campo dell'organizzazione viaggi, credo di avere una particolare sensibilità ed esperienza nell'accogliere e nell'aiutare a vivere al meglio i soggiorni nel nostro territorio.
Sono una persona socievole e curiosa di scoprire e conoscere, sia nei miei viaggi che nell'ospitare a casa mia.
ho lavorato nel campo dell'organizzazione viaggi, credo di avere una particolare sensibilità ed esperienza nell'accogliere…
Ngexesha lokuhlala kwakho eflethini ndiya kukushiya nayo yonke into oyifunayo ukulungiselela isidlo sakusasa sakho.
Ndiyafumaneka ukukunceda ulungiselele uhambo lweentsuku ezi-1 okanye ngaphezulu kwiinduli neentaba ezingqongileyo.
Ndiya kukuvuyela ukukunceda ufumane imibala kunye neencasa zendawo yaseCanavese kunye nobuhle besixeko sethu kunye neendawo ezisingqongileyo.
Ngaphaya koko, njengomqhubi wezithuthuthu, ndicinga ukuba indawo yethu yokuhlala ikhululekile kwabo bahamba ngamavili ama-2, kunye negaraji evaliweyo ekhoyo enokuthi iqulathe izithuthuthu ezi-3, sisisombululo esihle kwaye sikhuselekile.
Sikwanalo nethuba lokukubonisa iindlela ezithandekayo kunye ne-VERY evavanyiweyo kwiivili ezi-2 zokuhamba kwakho kunye nohambo lwakho kwiintaba ezijikelezileyo zommandla waseCanavese, kwi-Valle d'Aosta ekufutshane nakwindawo ye-morainic amphitheatre.
Ndiyafumaneka ukukunceda ulungiselele uhambo lweentsuku ezi…
Inombolo yomthetho: 00112500013
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ivrea